Uhambo lwe-Agile Marketing | Martech Zone
Ngeminyaka eyishumi yokusiza izinkampani ukukhulisa amabhizinisi abo ku-inthanethi, siqinise izinqubo eziqinisekisa impumelelo. Kaningi kunalokho, sithola ukuthi izinkampani zilwa nokumaketha kwazo kwedijithali ngoba zizama ukugxumela ngqo ekusebenzeni kunokuba zithathe izinyathelo ezidingekayo.
Ukuguqulwa Kwezentengiso Kwedijithali
Ukuguqulwa kwezokukhangisa kufana nokuguqulwa kwedijithali. Esifundweni Sedatha esivela kuPointSource - Executing Digital Transformation - idatha eqoqwe kwabenza izinqumo abangama-300 kwezokuMaketha, i-IT, kanye ne-Operations ikhomba izingqinamba amabhizinisi anazo ekuthuthukiseni ecabanga ngomsebenzisi wokugcina. Bathole ukuthi izinkampani:
Ukuntula imigomo nesiqondiso esichazwe ngokucacile - angama-44% kuphela amabhizinisi athi azethembele kakhulu emandleni enhlangano yawo ukufeza umbono wawo wokukhula kanti ama-4% awazethembi nakancane.
Ukulwela ukuhlanganisa okuhlangenwe nakho kwedijithali enesiteshi esinqamula - angama-51% kuphela amabhizinisi athi inhlangano yawo ihlangabezana nezidingo zomsebenzisi ezithile kuwo wonke amapulatifomu
Yiba nomqondo wefa odala izithiyo zenguquko yedijithali - Ama-76% amabhizinisi athi umnyango wawo uncintisana neminye iminyango enhlanganweni yawo ukuthola izinsiza kanye / noma isabelomali.
Ukusebenza ezinhlelweni eziphelelwe yisikhathi ezivimba ikhono lokwenza ngcono okuhlangenwe nakho kwedijithali - Abangu-84% bathi inhlangano yabo inamasistimu wefa ahlukile athinta isivinini sokuthuthukiswa kokuhlangenwe nakho okusha kwedijithali
Lezi yizinsongo enhlanganweni yakho njengoba unethemba lokuguqula ukumaketha kwakho kwedijithali. Sinomthengisi omkhulu esifundeni owayefuna usizo ngokukhangisa kwabo kwedijithali. Sibone ithuba elimangalisayo lokuthi basebenzise uhlelo olusha lwe-ecommerce oluhlanganiswe nendawo yabo yokuthengisa. Kodwa-ke, ubuholi bukhononda ngezindleko bakha uhlu lwempahla kanye nephuzu lohlelo lokuthengisa olwababiza amashumi ezigidi zamaRandi kule minyaka edlule. Bathe noma yikuphi ukutshalwa kwemali endaweni entsha yokuthengisa, yokusungula, kanye nokugcwalisa uhlelo bekungaphandle kwengxoxo.
Umphumela waba ukuthi bekungeke kube khona ukuvumelanisa noma ukuhlanganiswa phakathi kokuthengiswa okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Sisukile kuleli thuba ngemuva kwemihlangano eminingana ethembisayo - bekungekho nje indlela ebesingathola ngayo imiphumela yokukhula abafisa ukunikezwa ukulinganiselwa okukhulu kwezinhlelo zabo. Angingabazi okuncane ukuthi lokhu bekuyinto enkulu emzabalazweni wabo - futhi manje sebefake izicelo zokuqothuka ngemuva kokubuka ukwehla kwebhizinisi labo eminyakeni edlule.
Uma ibhizinisi lakho linethemba lokuzivumelanisa nokunqoba lezi zinselelo, kufanele usebenzise i ukumaketha okudala inqubo. Lezi akuzona izindaba, besilokhu sabelana ngazo izindlela zokuthengisa ezisheshayo okweminyaka embalwa manje. Kepha njengoba unyaka ngamunye udlula, umthelela wenqubo yokumaketha engaguquguquki uyaqhubeka nokulimaza amabhizinisi ngokwanda. Kuzothatha isikhathi eside ukuthi ibhizinisi lakho lingabi nandaba.
Izinkomba Zomsebenzi Oyinhloko bandise ibhizinisi ledijithali, kufaka phakathi ukuqwashisa, ukuzibandakanya, igunya, ukuguqulwa, ukugcinwa, i-upsell, kanye nesipiliyoni. Ku-infographic yethu yakamuva, siludwebe uhambo esithatha amaklayenti ethu ngalo ukuqinisekisa impumelelo yabo. Izigaba zohambo lwethu lwe-Agile Marketing zihlanganisa:
Ukutholwa - Ngaphambi kokuthi kuqale noma yiluphi uhambo, kufanele uqonde ukuthi ukuphi, yini okuzungezile, nokuthi uyaphi. Wonke umsebenzi wokumaketha, umxhumanisi oqashiwe, noma i-ejensi kumele asebenze ngesigaba sokutholwa. Ngaphandle kwayo, awuqondi ukuthi ungayihambisa kanjani impahla yakho yokumaketha, ukuthi ungazibeka kanjani emncintiswaneni, noma yiziphi izinsiza onazo.
Isu - Manje unamathuluzi wokuthuthukisa isu lesisekelo elisetshenziselwe ukufeza izinhloso zakho zokumaketha. Isu lakho kufanele lifake ukubuka konke kwezinhloso zakho, iziteshi, abezindaba, imikhankaso, nokuthi uzolinganisa kanjani impumelelo yakho. Uzodinga isitatimende semishini sonyaka, ukugxila kwekota, nokuhanjiswa kwanyanga zonke noma kwamasonto onke. Le yidokhumende ye-agile engashintsha ngokuhamba kwesikhathi, kepha inokuthengwa kwenhlangano yakho.
Implementation - Ngokuqonda okucacile kwenkampani yakho, ukuma kwakho emakethe, kanye nezinsizakusebenza zakho, usukulungele ukwakha isisekelo secebo lakho lokumaketha ledijithali. Ubukhona bakho bedijithali kumele bube nawo wonke amathuluzi adingekayo wokusebenzisa nokukala amasu akho wokukhangisa azayo.
Ukubulawa - Manje njengoba konke sekumi ngomumo, sekuyisikhathi sokusebenzisa amasu owakhile futhi ulinganise umthelela wawo jikelele.
Ukuthuthukisa - Phawula isibungu esipholile esifake ku-infographic ethatha isu lethu lokukhula bese silithutha libuyele emuva ku-Discovery futhi! Akukho ukuqedwa kwe- Uhambo lwe-Agile Marketing. Lapho usuwenzile isu lakho lokumaketha, kufanele ulivivinye, ulilinganise, ulithuthukise, futhi ulivumelanise nesikhathi sokuqhubeka ukuze ukwandise umthelela walo ebhizinisini lakho.
Khumbula ukuthi lolu wuhambo oluphelele, hhayi umhlahlandlela wamasu wokusebenzisa nokwenza ukumaketha okudala amasu. Insiza eyodwa enemininingwane eminingi ngamaConversionXL's Ungayisebenzisa Kanjani iScrum Yokumaketha Kwe-Agile.
Besifuna nje ukufanekisa ubudlelwano obuphakathi kwezigaba ezisemqoka zohambo lwakho nezinto okumele zihlolwe njengoba udabula indawo yonke yokumaketha kwedijithali. Ngiyethemba uyayijabulela le infographic ngendlela ebesikujabulela ngayo ukusebenza kuyo ngenyanga edlule! Kuyisisekelo sakho konke ukuzibandakanya kwamakhasimende ethu.
Ngisungule ne-Worksheet Worksheet Yokumaketha ukukusiza uhlele imizamo yakho yokumaketha futhi uqinisekise ukuhambisana nezinhloso zakho zebhizinisi.
Landa Iphepha Lokusebenzela Lokumaketha
Qiniseka ukuthi uchofoza inguqulo ephelele uma unenkinga yokuyifunda!
Tags: ukumaketha okudalauhambo lokukhangisa olusheshaimodeli yokukhangisa ye-agileinqubo yokumaketha esheshayoIgunyaUkuqwashisaUkuguqulwaukuguqulwa kwedijithaliUkutholakalalwekucocisanaukubulawaOkuhlangenwe nakhoukuqaliswaUhamboukumaketha i-methologyimodeli yokumakethaimodeliukuthuthukisainquboukugcinwaisuIngucukoupsell